GeoFS: Egwuregwu ikuku nke ikuku site na ihe nchọgharị iji Cesium | Site na Linux
Onwe m, anaghị m ewere onwe m a Omiiko Gamer, ma ekwetara m na ahụrụ m ya n'anya egwuregwu ụgbọ elu, ma hà bụ ụgbọ elu dị mfe ma ọ bụ agha ikuku. Ya mere enwere m ike ịgụ gbasara ya GeoFS, egwuregwu nke free online ụgbọ elu simulator, Ekpebiri m ịnwale ya ozugbo wee hụ otu ọ dị.
Dị ka ndị mmepe ya si dị, n'ime ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, a kọwara ya ná nkenke:
"A free online ụgbọ elu simulator".
Agbanyeghị, n'ụzọ sara mbara anyị nwere ike ịsị na ọ bụ, a egwuregwu ikuku, inweta, free, web-based, multiplayer ma jiri onyogho satịlaịtị zuru ụwa ọnụ iji weghachite map ya na ọnọdụ ya.
1 GeoFS: Ihe nlere nke ugbo elu n’efu na ntanetị
1.1 Gịnị bụ GeoFS?
1.4 Ahụmahụ onwe onye
GeoFS: Ihe nlere nke ugbo elu n’efu na ntanetị
Gịnị bụ GeoFS?
Ọhụrụ a, ọhụrụ na-akpali egwuregwu e kere site Xavier Tassin, gburugburu afọ 2010. Ọ na-arụ ọrụ ike dị ka a ngwa mgbakwunye na ngwa Google Earth. Ebe taa GeoFS na-eji teknụzụ mepere emepe a na-akpọ Chibuzor iji nye ụwa ikuku ikuku nke ndị egwuregwu na-ahụ.
Yabụ, GeoFS dị mfe nrụpụta na kpamkpam n'efu, site na sistemụ arụmọrụ ọ bụla nwere ike ịme ihe nchọgharị weebụ nke oge a. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na njikwa dị mfe nke na-eme ka simulator ụgbọ elu bụrụ n'ezie otu n'ime ndị dị ugbu a, otu n'ime ndị kachasị ịnweta, ya bụ, ọ dị mfe ijikwa ma kpọọ.
"Agbanyeghi na odi nfe, ihe nlele ugbo elu nke GeoFS zuru oke iji nye ezi ahuhu ihe eji eme njem. Karịa egwuregwu, GeoFS bụ ezigbo simulator ụgbọ elu". Banyere GeoFS
Inwe ọtụtụ ụgbọ elu dịnụ kwesịrị imeju ndị na-anụ ụgbọelu niile. Nhọrọ nwere ike ịdị site na obere ụgbọ elu Piper Cub dị mgbagwoju anya na nnukwu Airbus A380.
A na-eme mbara igwe ikuku (gburugburu ebe obibi) site na onyonyo satịlaịtị na data mpaghara ala.
Enwere ike ịgba ya n'efu na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla nke oge a na-enweghị mkpa ịwụnye ihe ọ bụla.
Uzo ya na-enye ndenye aha na ihe onyonyo ikuku dị elu site na gburugburu ụwa (nke kwesịrị ekwesị maka ụgbọ elu VFR) na ntinye nke ngwa abụọ maka ngwaọrụ mkpanaka.
Ọ na-aga n'ihu na-akawanye mma n'ihi ndị otu obodo ya bụ ndị na-arụsi ọrụ ike na-enye aka site na ịwu ụgbọ elu ọhụrụ ma ọ bụ na-emepe mgbakwunye iji kwalite atụmatụ ndị dịnụ iji nye ahụmịhe ụgbọ elu na-atọ ụtọ kwa ụbọchị.
Dịka e kwuru na mbụ, ọ dị mfe ịnweta ya mere enwere ike igwu ya ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ma nke a bụ, karịa ihe niile, na njikwa ya dị mfe. Ndị a bụ ihe ndị a:
+ Ma - igodo iji nwayọọ nwayọọ mee ngwangwa / decelerate.
Igodo 0 gaa na 9 iji mee ngwangwa / gbadata na akpaghị aka. N'ịbụ isi 9, ome osooso zuru.
Ké na-atụ ngwaọrụ na-arụ ọrụ dịka ihe ntụzịaka maka mgbanwe ndozi.
Nwere ike ijikwa ụgbọ elu ahụ na keyboard na / ma ọ bụ òké, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-agba ọsọ anyị nwere ike iji akụ keyboard ma ọ bụ mmegharị ahụ iji pụọ ma ọ bụ rute, ma gbagoo ma ọ bụ gbadaa.
Igwefoto mgbanwe (visual akụkụ) dị site na iji menu ma ọ bụ site na ịpị «C» igodo.
Ekwe ka ọdịda gia na-eweli ma ọ bụ wetuo site na ịpị «G» isi na n'ụzọ zuru ezu braking site na ịpị «Space» igodo.
Maka ozi ọzọ na Ntụziaka Iji mara otu esi eji ahụigodo, igwe ma ọ bụ njikwa egwuregwu (ọ joụ), ị ga-enweta ihe ndị a njikọ.
Onwe m masịrị m nke ukwuu, ebe ọ bụ na, ahụrụ m na ọ dị mfe iji, ọ dịịrị ya mfe Distro GNU / Linux MilagrOS (MX Linux) gbasara m Ihe nchọgharị weebụ nke Waterfox, m hụkwara Jehova n'anya ọtụtụ ụgbọ elu dị iche iche dị maka ule.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" ọhụrụ a, otutu na fun egwuregwu a na-akpọ «GeoFS», nke bụ isi a free online ụgbọ elu simulator egwuregwu iji teknụzụ na-emeghe n'efu na nke emeghe site na Cesium mediante Chibuzor; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » GeoFS: Egwuregwu ikuku nke ikuku site na ihe nchọgharị site na iji Cesium
Dị ka a tụrụ anya, Microsoft amalitelarị ime ihe na nzuzo nke koodu XP